Nerio & Isabella flat
I-Apartment kwi-villa yeentsapho ezimbini, i-panoramic terrace enombono wolwandle, ilungele iintsapho ezinabantwana, i-wi-fi yamahhala, umabonwakude, igadi, indawo yokupaka yabucala, inkonzo enokwenzeka yebhasi yoluntu ekungeneni, umgama omfutshane ukusuka kumbindi weMuggia kunye nomhlaba. kunye noqhagamshelo ulwandle Trieste kunye kwiindawo ezahlukeneyo Slovenian kunye Croatian Istria. Izilwanyana azivumelekanga.
Ingca kunye nomyezo kwipropati ziyafumaneka kwiindwendwe, ngaphezu koko, ngokuxhomekeke kwixesha, kunokwenzeka ukuqokelela kunye nokunambitha isiqhamo kwipropati (i-cherries, i-apricot, amakhiwane, i-plums, iidiliya, i-walnuts kunye ne-hazelnuts)
Into ephambili kukuba isondele kakhulu kumbindi wedolophu (1.2Km) kwaye kwangaxeshanye ibekwe kwindawo ezolileyo kakhulu kunye nendlela emalunga neemitha ezingama-50 ukusuka kwindlu kwaye ayixakeki kakhulu.
Nangona kungekho malungiselelo okutya okanye isidlo sakusasa, iindwendwe ziyamkelwa ngokuquka iziqhamo ezitsha, iziselo, izinto ezibhakiweyo, ikofu, iti, ibhotolo kunye nejam ukuze zingabi naxhala ngeentsuku zokuqala zokuhlala kwazo.